Tara Loatra Ny “Fifonorohana sy Fifamelàna” Ho An’ny Governemanta Jamaikana Raha Tsikongonià No Resaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Novambra 2014 14:07 GMT
Satria manohy ny fandravàna ny Karaiba ny Tsikongonià, otrik'aretina teraka avy amin'ny moka izay mahatonga fanaviana mahery vaika sy fanaintainan'ny vanin-taolana, nikaon-doha ireo governemantam-paritra nitady izay fomba hiadiana amin'ny firongatry ny aretina.
Any Jamaika, izay tsy mitsaha-mitombo ny isan'ny tranga Chik-V, nianjeran'ny rihitra noho ny famelàna ilay tranga tsy ho azo fehezina sy noho ny tsy fiomanana tamin'izay ho fiantraikany ny Antoko Politika Nasiônaly, izay eo ambanin'ny fitantanan'ny Praiministra Portia Simpson-Miller. Tamin'ity herinandro ity, nanambara i Simpson-Miller fa eo afovoan'ny “vonjy taitra nasiônaly” ny firenena noho ny firongatry ny Chik-V.
Tezitra tamin'ny fomba fanao tsy nahomby nataon'ny governemanta Jamaikana handraisana an-tanàna ilay tranga i Carolyn Joy Cooper, izay mi-blaogy ao amin'ny “Jamaica Woman Tongue”. Tsy nanao firy tamin'ny fanabeazana ny vahoaka momba ilay otrik'aretina sy ny fomba fiparitahany ny Ministeran'ny Fahasalamana; tsy ampy vokatra simikà mba hisedràna ilay aretina ireo toerana voatokana amin'izany, ary toa tsy manana fahafahana hahazo ny fanafody ilaina hanasitranana azy io ireo toeram-pitsaboana.
Ara-toekarena, eo amin'ny toerana sarotra i Jamaika, amin'ny ampahany noho izy voafatotry ny Tahirim-Bola Iraisam-pirenena (FMI), tamin'ny nanekeny findramam-bola 932 tapitrisa $ tamin'ny 2013, miaraka amin'ny 68.8 tapitrisa $ izay ho avoaka tsy ho ela. Raha ny hita, manohy ny fandaniam-bola toy ny tsy manana olana ireny ny governemanta. Tao amin'ny Twitter, nandatsa ny mpampiasa iray:
Each MP to get J$2M to fight #Chikungunya so everybody happy. @JamaicaPNP @JLPJamaica we certainly do hope #Jamaica will get value for money
Faly ny rehetra rehefa mahazo J$2M ny solombavambahoaka tsirairay mba hiadiana amin'ny #Tsikongonià. @PNPJamaikanina @JLPJamaikanina tena manantena marina isika fa hahazo ny sanda mifandanja amin'ilay vola i #Jamaika
Nandritra izany fotoana izany, ho valinteny tamin'ilay fahafatesana voalohany naterak'ilay aretina tao amin'ny firenena, niteny ny minisitry ny fahasalamana fa te ho voa izy mba hahatakarany ny zavatra iainan'ireo vahoaka.
Jamaican Health: #Jamaica and The #Chikungunya virus in Cartoons on THE ISLAND @infoChikungunya JOURNAL http://t.co/BdSJFP6hZh
Fahasalamana Jamaikana: #Jamaika sy ilay otrik'aretina #Tsikongonià ao anatinà sariitatra ILAY NOSY @vaovaoTsikongonià FAMPAHALALAM-BAOVAO http://t.co/BdSJFP6hZh
Can't see why it's State responsibility to be cleaning up backyards of able bodied persons. #Chikungunya #Jamaica
Tsy mety hitako ny antony maha-andraikitry ny Fanjakana ny fandiovana ny ambadikin'ny tranon'ireo olona tsy manan-kilema. #Thikongoniç #Jamaika
Niteny ilay antson'ny praiminisitr'i Jamaika ho an'ny Jamaikana mba “hanampy ny governemanta hiatrika ny krizy ara-pahasalamam-bahoaka” i Cooper: